Ntinye njem | Ego kachasị mma iji gaa njem na ọnụahịa kacha mma | Akụkọ Njem
Want chọrọ ịchọpụta ndị kasị mma na-enye iji gaa na-enweghị nọrọ extra ego? N'akụkụ a, ị ga-ahụ onyinye kacha mma, ọnụ ahịa na ego dị ala na ụgbọ elu, họtel na njem ọ bụla na ụwa ka ị nwee ike iji ha mee ihe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ echefula otu n'ime onyinye ndị a, ugbu a ị nwere ike ịnweta ozi email na onyinye ọhụrụ ọ bụla anyị bipụtara. Maka ya naanị ị pịa ebe a ma denye aha na nchekwa data anyị Ga-enweta nkasi obi ịnata onyinye anyị niile site na email!
Onyinye kacha ọhụrụ bipụtara
Lee ị nwere ndepụta zuru ezu nke azụmahịa na azụmahịa ndị ahịa kachasị ọhụrụ e bipụtara.
por Maria eme 3 afọ .
Anyị niile na-amasị njem na ọ bụrụ na ọ bụ obere ego, ihe niile ka mma. Nweta tiketi ụgbọ elu dị ọnụ ala ...
Oge izu na Lisbon: lightlọ nkwari akụ + ụgbọ elu na ọnụahịa pụrụ iche
Otu izu ụka na Lisbon bụ ozi ọma mgbe niile. Karịsịa, mgbe anyị na-ekwu maka ọnụahịa emechiri emechi ...
Mgbe a na-enye onyinye dị otu a, anyị agaghị ajụ. Anyị na-etinye akụkụ nke ndụ anyị chọrọ ịga njem, mana na-enweghị ...
Anyị hụrụ ya n'anya mgbe anyị hụrụ ụgbọ elu ndị ahụ gbakwunyere azụmahịa. N'ihi na enweghị mgbagha, mgbe anyị mere mgbakọ na mwepụ anyị ghọtara na ...
Ọtụtụ ndị mmadụ họrọ ịhọrọ ebe ha ga-anabata na afọ ọhụrụ. N'ihi na ọ bụ ụzọ nke inwe ike ...
Otu afọ ọzọ, Black Friday dị ebe a. Ọ bụ eziokwu na a na-agwa anyị mgbe niile na anyị kwesịrị ịzụta ...
Inweta tiketi ụgbọ elu maka euro 40 bụ ihe gbagwojuru anya. More, mgbe ọ na-aga ebe dị ka ọ bụ ...
Ọ bụ nke ọzọ n'ime onyinye ndị ahụ anyị na-enweghị ike iche ọtụtụ. Maka na oge dị otu a anaghị eme ọtụtụ oge. Anyị bụ…
Akpọrọ ya ma mara ya 'obodo ndị mmụọ ozi', Bangkok bụ isi obodo Thailand. Na mmetụta dị ukwuu ma na ...
Anyị hụrụ ahịa niile gụnyere azụmahịa. Maka na mgbe ụfọdụ anyị n’enye onyinye dị ka nke a. Gaa na ọgụgụ…